နိုင်မြန်မာ – ရှာပေဦးတော့ ထမင်းထုပ်ကြီးနဲ့ | MoeMaKa Burmese News & Media
လက်ပါးစေ တစ်ရာ နှစ်ရာနဲ့
ရှာပြီးကြပလား… ။ ။
One Response to နိုင်မြန်မာ – ရှာပေဦးတော့ ထမင်းထုပ်ကြီးနဲ့
Htwe on May 10, 2016 at 8:30 am
Thank you so much Naing Myanmar ! That is the reality incident.
We appreciate you with kind regards.